Blog 1 Column Right Sidebar – Page 3 – Codka Qaranka Tanadland
Maxaad Kala Socotaa Degmada Ugu Khayraadka Badan Gobalka Xariir Ee Halabooqad?0
Magaalada Halabooqad waxay leedahay, dugsi H/DH, dugsi sare, dugsi farsamada gacanta ah iyo labo iskuul oo xanaanoda caruurta ah. Waxay kaloo leedahay 2 suuq oo laga adeegto. Kawaan casri ah
oo xoolaha lagu qalo iyo suuq hilibka lagu gado.
Degaamada Bariga Gobalka Mudug Sida Loo Kala Leeyahay0
Beesha Habar-majeerteen oo ah beesha ugu degaamada yar bariga gobalka Mudug waxay leeyihiin tuulada (Seemade) oo ay beesha reer (Fiqi-Ismaaciil) la wadaagaan. Tuulada (Bali-busle) oo la wada leeyahay. Laakiin marka ay noqoto degaan Habar-majeerteen u gaar ah. Habar-majeerteen wax ay leeyihiin waxaa jira magaalada Jiriiban oo ah xarunta degaanka Jiriiban.
Maleeshiyada Soodegey Buurta Sanguduud Oo Xasuuq Iyo Dhac Ba’an Ku Haya Beesha Sacad0
Ciidan kaan yarkaa oo 100 ka nin ah ayaa reermiyiga beesha Sacad kadeedey, oo biyaha balida iyo togaga ku jira ka hor istaageen. Dhawaanahaan oo dhanna xoolaha ka soo dhacahayeen beesha Sacad. Maadaama beesha Sacad Ciidamadii difaacilahaa ay ku maqanyihiin magaalada Cadaado oo u Xaaf ka kaxaystay!!.
Consumers In A fix As The Cost Of Cooking Gas Rises0
Beesha Sacad Oo Ku Ceebowdey Dadkii Maatada Ahaa Ee Ay Ku Laayeen Wadada Wadaagsin Iyo Iskudhicii Ka Danbeeyey!!0
Ninka Awrtable oo maxasta mahbarka ah wadey waxaa jidka u galay oo weeraray maleeshiyo beesha Sacad ah. Meeshaas maleeshiyada beesha Sacad waxay ku dileen ninkii Owrtable iyo 3 qofood oo maxastii uu wadey ka mid ah. Waxayna dhaawac ahaan ay wadada uga tageen 7 qofood oo dad waayeel ah iyo caruur u badan.
DDS Oo Degmooyin U Magacaabaya Magaalooyinka Dhagafur, Dhudub Iyo Dhanbacaad.0